9 Statistics paMhedzisiro yeMushandisi YeMushandisi Chiitiko Martech Zone
Chipiri, May 31, 2016 Chipiri, May 31, 2016 Douglas Karr
Wakambotsvaga yako webhusaiti paGoogle ukaona iyo Mobile-Friendly tag pairi? Google ine kunyange nhare-inoshamwaridzika yekuyedza peji kwaunogona kutarisa nyaya nesaiti yako. Chiyero chakanakisa chinoongorora zvinhu uye chinoita chokwadi chekuti chakakamurwa zvakanaka uye chinoonekwa. Mobile-ushamwari haisi nhare yakagadziridzwa, zvakadaro. Ingori hwaro hwekutanga uye hautarise hunhu chaihwo hwevashandisi vevashandisi venhare pane yako saiti.
Wese muridzi wemabhizinesi azvino haachazoita sarudzo - unofanirwa kunge uine runhare mbozha rwepamhepo, kwete chete rwekubatsira vatengi vako mbozhanhare, asi kuti uwane navo pakutanga! Rahul Alim, CustomCreatives.com
A webhusaiti yewebhu izvo zvakagadziridzwa kune mushandisi wemushandisi zvine zvisingabatsiri zvakanaka. Kutanga, mushandisi anoshanyira zvese kuburikidza nedesktop uye nhare achave neruzivo rwakafanana, zvichivagonesa kufamba uye kuwana ruzivo rwavanoda nyore. Chechipiri, kushambadzira kuchaenderana zvakanaka. Yetatu, saiti inogona kurodha nekukurumidza… pane kudzosera traffic, CSS inoita kusimudza kusimudza.
Nei uchipedza nguva uchigadzirisa nhare? Heano gumi manhamba anoratidzira kudzoka kwekudyara pakuvandudza yako mobile ruzivo:
33% yezvose zvingangotengeswa zvinotadza kana bhizinesi 'webhusaiti isina kugoneswa nhare
40% yevanhu vachatsvaga imwe saiti kana mhedzisiro yekutanga isiri mobile optimized
45% yevanhu vane makore 18-20 vanoshandisa yavo smartphone kutsvaga online mazuva ese
80% yevatengi vanopedzisa atleast zvimwe zvekutenga kwavo kuburikidza ne smartphone mwedzi wega
67% yevaridzi vese mbozhanhare vanoshandisa yavo smartphone kuongorora webhu
25% yevashandisi veinternet muUS vanongowana chete webhu kuburikidza nefoni nhare
61% yevatengi vane maonero ari nani emakambani ane ruzivo rwakanaka rwekufambisa
57% yevanhu havangakurudzire bhizinesi kana iine saiti isingasviki inokwana
70% yeese epamhepo anotsvaga anotsvaga anotungamira kune mutengi achitora matanho mukati meawa
Tags: dhizaini yenharenhare yekugadziramobile optimizationnhare inopinduramobile nhambanhamba dzekushandisa nharenhare yemushandisi ruzivonhare uxwirirana patani
Jul 2, 2016 pa 2: 22 AM